Somaliland: Cabdikariin Axmed Mooge Oo Fashiliyey Cidda Qiimo-tirtay Baasaabboorka Somaliland Oo Uu Sheegay Inuu Halkii U Hoosaysay Marayo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cabdikariin Axmed Mooge Oo Fashiliyey Cidda Qiimo-tirtay Baasaabboorka Somaliland Oo Uu...
“Dhulka intaas le’eg ayey doonayaan inay Saldhig Millateri ka dhigtaan, Qof Bina-aadam ah in qaadda oo Imaaradda Dubai ka mid ahna uma oggola Qof Somaliland ahi in uu booqdo, markaa waxan la is-dhaafsaday anigu garan maayo..”
“Somaliland waxay u baahan tahay Madax iyo Siyaasiyiin daacad u ah dalka iyo Baasaabboorka oo markay waddan u dhoofayaan ku dhoofa Baasaabboorka, waddanka ka diidana aan u tegin, Cidda dishayna waa…” Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge
Siyaasiga Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa sheegay in Baasaabboorka Somaliland halkii ugu hoosaysay uu qiimihiisu gaadhay dhawrkii sannadood ee ugu dambeeyey ee ay xilka haysay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo oo uu Wasiir Ku-xigeenka Kalluumaysiga iyo Wasiir Ku-xigeenka Qorshaynta Qaranka-ba ka soo noqday, intii aanu iska casilin xilka Qorshaynta dabayaaqada sannadkii 2015-kii.
Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu sheegay inaanu illaa hadda garanayn waxay Somaliland dhaafsatay wareejinta Dekedda Berbera iyo Saldhigga Millateri ee ay dawladda Imaaraadka Carabta siisay, maaddaama oo Baasaabboorka Somalililand aanay Muwaaddiniintu ugu dhoofi karin Dubai ama ku joogi karin.
“Qaranka Somaliland markii uu ku dhawaaqay in uu ka go’ay Soomaaliya inteeda kale, wuxuu samaystay Calan u gaar ah, Lacag u gaar ah iyo Baasaabboor u gaar ah, Lacagtii waa la isticmaalaa, Calanna wuu leeyahay. Laakiin, Baasaabboorka Somaliland ayaan-darrooyin badan baa haysta, Madaxda Maanta Somaliland ka talisa badi waa Niman Qurbaha ka yimi, waxay isticmaalaan Baasaabboorro Shisheeye, taasi waxay keentay in Baasaabboorkii Somaliland baahi ay u qabi waayaan oo waddamada Xidhiidhku innaga dhexeeyo markay tegayaan ay ku tegi waayaan Baasaabboorka Somaliland.” Sidaa ayuu yidhi Cabdikariin.
Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu tusaale u soo qaatay Wasiirradii arrimaha dibedda isaga dambeeyey wakhtigii Xukuumaddii Daahir Rayaale Madaxweynaha ka ahaa ay talada haysay heerka ay gaadhsiiyeen Baasaabboorka Somaliland, waxaanu yidhi; “Muwaaddinka Somaliland ee Cabdillaahi Maxamed Ducaale markii uu ahaa Wasiirka arrimaha dibedda, waxaan uga marag-kacayaa in uu ku dhoofi jiray Baasaabboorka Somaliland, illaa maantana uu haystaa oo uu ku dhoofaa, Adna Aadan Dhakhtar markay ahayd Wasiirka arrimaha dibedda iyada oo heli karaysay Baasaabboor kale oo dal kale oo ay dhalashadiisa haysatay waxay ku safri jirtay Baasaabboorka Somaliland, welina ku safartaa. Somaliland waxay u baahan tahay Madax iyo Siyaasiyiin daacad u ah dalka iyo Baasaabboorka oo markay waddan u dhoofayaan ku dhoofa Baasaabboorka, waddanka ka diidana aan u tegin.”
“Baasaabboorka Somaliland maanta halkii ugu hoosaysay buu yaallaa, 26 sano oo nolosheenna ka mid ah baynu u samraynay Baasaabboorka, kuwa Warqadda ka dhigay ee Baasaabboor aan qiimo lahayn ka dhigayna kuwa Maanta talinaya weeye. Berigii hore Baasaabboorka Somaliland waddamo badan oo Afrika ka mid ah oo Yurub ka mid ah oo Adduunka ka mid ah baa lagu tegi jiray.” Sidaa ayuu yidhi Cabdikariin.
Mar uu Cabdikariin Axmed Mooge ka hadlayey arrinta Imaaraadka Carabta iyo Somaliland, waxa uu yidhi; “Immika Dubai World baa innala joogta, Nimankii Carbeed way innoo yimaaddeen, Saldhig Millateri bay Berbera ka samaysanayaan, Dekeddeennii aan Somaliland-deeq u bixiyeyna way qaateen, haddana Baasaabboorka Somaliland Dubai kuma booqan karo. Dhulka intaas le’eg ayey doonayaan inay Saldhig Millateri ka dhigtaan, Qof Bina-aadam ah in qaadda oo Imaaradda Dubai ka mid ahna uma oggola Qof Somaliland ahi in uu booqdo, markaa waxan la is-dhaafsaday anigu garan maayo. Baasaabboorka Somaliland haddaan sidan loo dhaamin, dalka iyo Baasaabboorku way isku xidhan yihiin.”
Siyaasiyiinta iyo Masuuliyiinta Xukuumadda ayuu Cabdikariin ku dhalliilay masuuliyadda qiimo-dhaca Baasaabboorka Somaliland, waxaanu yidhi; “Dadka Masaakiinta ah ee Shacabka ah ee laga dhigayo Dad Koonteennar ku xidhan dee socon mayso ee halla daayo, Madaxdu waa in ay isticmaashaa waxay Shacabku isticmaalayaan, maaha inay Baasaabboor Ajaanib ah Jeebka dambe kala soo baxaan Madaxda iyo Siyaasiyiintu, waajibka koowaad Dadka Madaxda ah ayaa ka saaran Baasaabboorka.”
Geesta kale, Cabdikariin Axmed Mooge, waxa uu sheegay in Xukuumadda talada haysaa masuul ka tahay Sicir-bararka Dalka saameeyey iyo kor-u-kaca qiimaha Doollarka, isaga oo sheegay in Hay’adaha Maaliyadda iyo Baanka dhexe ku fashilmeen wax ka qabashada arrintaas, isla markaana halkii ay wax ka qaban lahayd soo Daabacato dawladdu Lacag cusub oo Koonteennarro ah, taas oo dib loogu urursado marka suuqa la geliyo Lacagta adage e Doollarka ah. Waxaanu soo jeediyey inay joojisu Xukuumadda lacagta cusub, xakamaysana qiimaha muceeshadda, adeegyada kale iyo kor u kaca Sarrifka Doollarka.
Sidoo kale, waxa uu dhalliilay nidaamka Waxbarashada dawliga ah ee dalka oo uu ku tilmaamay mid tayadiisu liidato, isla markaana Dadka intii awoodaysay Ubadkooda geysteen Dugsiyada gaarka loo leeyahay, intii Bulshada aan awoodi karayna ku hadhay, tayo wax-barasho oo hufanna aanay ku qabin. Waxa uu Bulshada ugu baaqay Cabdikariin inay ka fogaadaan Nidaamka Qabyaaladda ee hadda lagu dhaqmo oo uu sheegay inay qabyaaladdu qayb ka tahay horumar la’aanta dalka iyo dadka Somaliland ragaadiyey, waxa keliya ee dhibaatooyinka jira lagaga bixi karaana yihiin in Qabyaaladda laga tago oo Bulshadu midawdo Sharciga la barto oo dawladda xaqeeda la garto, xaqa Qofku ku leeyahayna la garto oo xisaabtan shaqeeyo, halka Siyaasiga wax xumaynayaa hadda qabiil dabada ka gelinayo uu Siyaasigu Bulshada si siman uga baqo oo uga xishoodo marka ay si cadaalad ah ula xisaabtamaan Madaxdooda.
Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge
Xaalada Dalku Marayo
Wasiir Cadami Oo U Jawaabay Siyaasiyiinta Madaxweynaha Ku Eedeeya Inaanu Talin Ee Ay Taliyaan Dad Kale, Kana Hadlay Is Casiladii Cabdillaahi-jawaan
Somaliland: Xukuumadda Oo Saddex Maalmood Kadib Wareejintii Dekedda Berbera, Dhaqan Gelisay Cashuur 100% Ka Badan Tii Hore Loo Qaadi Jiray.
Somaliland: Guddoomiyaha Cusub Ee Baanka Dhexe Oo Xilkii Si Rasmi ah Ula Wareegay